ल हेर्नुस त! कोरियामा नेपालीले नै नेपालीको २३ लाख पैसा लिएर फरार भएपछि! – Khabartime
ल हेर्नुस त! कोरियामा नेपालीले नै नेपालीको २३ लाख पैसा लिएर फरार भएपछि!
२५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १५:५२ 205 पटक हेरिएको
पारिश्रमिकका दृष्टिकोणले आकर्षक मानिएकोृ कोरियामा नेपालीले आत्महत्या क्रम बढे संगै कोरियामा अहिले विभिन्न अनेकाै घटना हुन थालेका छन्, त्यसै गरि त्यहाँको रोजगारी चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । आत्महत्या रोक्न गतिलो प्रयास नगरिए कोरियाको रोजगारी नेपालका लागि अर्थहीन हुनेसम्म अनुमान गर्न थालिएको छ । र अब अहिले घटी रहेको घटनालाइ कसरि रोक थाम गर्न सकिन्छ भनेर विचार गर्ने बेला आएको छ,
इजरायलकाे सिमाना संवेदनसील् लबनानी